Kumbiwe isidumbu e-Richmond | News24
Kumbiwe isidumbu e-Richmond
KUSHINTSHE izinto ophenyweni lokubulawa kwalowo owayeyisekela likaMeya wase-Richmond uNkk Thandazile Phoswa njengoba ngoLwesibili ekuseni mhla ka-6 kuNdasa (March) kumbiwe isidumbu sakhe emathuneni ase-Richmond.
UNkk Phoswa watholwa eseshonile endlini yakhe enenxeba lokudutshulwa ekhanda esikhathini ngonyaka odlule
Kwabe sekuboshwa isoka lakhe uMnuz Samukelo Chili owayesebenza njengomvikeli (body guard) ngaphansi kwaMasipala wase-Mshwathi.
UMnuz Chili wadedelwa inkantolo eyathi ubufakazi obumbandakanya naleli cala abukho.
Ngesikhathi i-Echo ihambele kula mathuna ngoLwesibili ifice amalungu omndeni kaNkk Phoswa, abasebenzi bakamasipala nabasebenzi basemakhazeni akwaHulumeni.
Ubabomncane kaNkk Phoswa, uMnuz Zachariah Phoswa akathandanga ukudalula imbangela yokumbiwa kwesidumbu selungu lawo kodwa, wathi ucela ukuba umndeni uthintwe ngemuva kwamasonto amabili ngoba lolu daba lusabucayi okwamanje.
Ngokuthola kwe-Echo ngomthombo osondelene nayo, ukumbiwa kwesidumbu sikaNkk Phoswa kulandela ngemuva kokuba iNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ikhiphe umyalelo othi asimbiwe kulandela uphenyo oluqhube kayo.
“Kunophenyo oluqhubekayo ngokushona kukaNkk Phoswa manje luphoqe ukuba kumbiwe isidumbu sakhe ukuze sizohlolwa kabusha ngoba kunokuphambana kwemibiko ngokuhlowa kwesidumbu,” kusho umthombo.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uKapteni Nqobile Gwala uthe ukumbiwa kwesidumbu sikaNkk Phoswa kuyingxenye yophenyo olwenziwa i-Provincial Task team lokulwa nokubulawa kosopolitiki.
“Uma seluphothuliwe uphenyo lokuhlolwa kwesidumbu sikaNkk Phoswa kukhona abazoboshwa,” kusho Kapteni Gwala.
Ukushona kukaNkk Phoswa kwadonsa amehlo eningi njengoba kwalendela ngemuva kokubulawa kwalowo owayeyimenenja kaMasipala wase-Richmond uMnuz Sibusiso Sithole.
NgoLwesihlanu olwedlule inhlangano yentsha yeqembu elibusayo (ANCYL) esiFundeni i-Moses Mabhida imashele eMnyangweni wezokuphepha koMphakathi nalapho ihambise uhlu lwezikhalo zawo.
Le nhlangano ibikhala ngakho ukubulawa kosopolitiki nethe ifuna lo mnyango usukumele phezulu ukuphenywa kwamacala okubulawa kosopolitiki.
Lo omnyango unikezwe amasonto amabili ukuba uphendule kuhlu lwezikhalo.
Kunophenyo oluqhubekayo ngokushona kukaNkk Phoswa manje luphoqe ukuba kumbiwe isidumbu sakhe ukuze sizohlolwa kabusha ngoba kunokuphambana kwemibiko ngokuhlowa kwesidumbu.